Ikhabhinethi ye-16: I-Lakeside Oasis eMntla Frontenac - I-Airbnb
Ikhabhinethi ye-16: I-Lakeside Oasis eMntla Frontenac
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDerrick
Indlu yamaplanga eyi-16 ikwindawo yeholide yosapho ekufutshane ne-Mississagagon Lake, enyanisweni, ungabona ichibi kuzo zonke iifestile zesakhiwo. Inokuba ngathi sisiqithi.
Izinto ezininzi onokuzenza KWINDAWO YAKHO, kuxhomekeka kwixesha lonyaka nakwiimeko! Ukuloba, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane, ukuqubha, ukutyibilika ekhephini, ukutyibiliza emkhenkceni, iindlela zamahlathi, ubugcisa kunye nevenkile yezobugcisa kunye nokunye!
Imali yokucoca intsha ukususela ngoMatshi 2022, kodwa ukuba uza nezinto zakho zokondlula ibhedi, loo mali iza kubuyiswa xa uphuma. Ndazise ukuba uceba ukuza nezinto zakho zokondlula ibhedi xa ubhukisha.
Ebudeni bentwasahlobo, ekwindla nasebusika indlu yamaplanga ifana nendawo entle. Kusenokwenzeka awunaba nabamelwane nangona unezinye izindlu zamaplanga ezikufutshane. Ngoba? Indlu yamaplanga inobusika obungathethekiyo kwaye uninzi lwezinye izakhiwo alikho. I-Knotty pine kunye "ne-hygge" epholileyo yenza le ndawo ibe yindawo entle kubantu abathandanayo abafuna ukuphuma ehlabathini.
Ngexesha lasehlotyeni libethwa ngumoya ngaphakathi kodwa lixakeke kakhulu ngaphandle. Le yindawo yeholide ejongene nosapho ngoko uza kubona abantwana nezilwanyana zasekhaya, izikhephe nabantu abahambayo. Iintsuku ezininzi zintle kwaye zithe cwaka ukuze wonwabele umlilo wokukhempisha okanye wonwabele inkwenkwezi, kodwa ezinye iintsuku zisenokuba nkulu ngakumbi, ngokukodwa ngeempela-veki. Sizama ukugcina ingxolo engathethekiyo iphantsi, ingakumbi emva ko-11pm.
Ikhitshi: ifriji, ioveni, i-microwave, i-blender, into yokupheka ecothayo, umatshini wokwenza ikofu, iketile, i-toaster, i-blender, i-brie baker... kunye neembiza, iipani, izitya, kunye nazo zonke izitya (kunye neziqholo!) onokuzifuna. Inyama eyojiweyo yangaphandle kunye nebhabob yentsimbi yasePersi.
Igumbi lokuhlambela: * * elisandul 'ukuhlaziywa ngeenkuni ezinuka kamnandi ze-cedar!!* * Ishawa ezimeleyo, ithobhi, isinki, iphepha langasese nesepha yezandla. Yiza nezinto zakho zokuthambisa neetawuli. Kukho nendawo encinci apho unokuhlala uze ulinde ngoxa umthandi wakho ehlamba. Ukwenza loo nto kuza kukunika into onokuyonwabela efana nesauna! Ooo la la.
Amalungiselelo okulala: Unomdla wokuzama umatrasi obizwa ngokuba yi-Endy okanye i-Hamuq?? "Igumbi Eliluhlaza" libonakala kakuhle kakhulu echibini ibe linebhedi elala abantu ababini (Umatrasi omfumamfuma), "Igumbi Eliluhlaza" lineebhedi ezimbini ezilala abantu ababini (oomatrasi abayiHamuq) abanokutyibilika ukuze benze iKing, okanye bahlale bodwa ukuze bamkele abantwana abambalwa okanye iibhedi ezilala umntu omnye. Igumbi lokuhlala linesofa enomatrasi omamfuma (ophindwe kabini). Qhagamshelana nam ukuze ufumane iikhowudi zokumema ezenzelwe wena (wine-win)!
* * * Xa ubhukisha, nceda undazise ukuba ungathanda ukuba nezinto zokondlula ibhedi zinikezelwe. Ukuba uza nezakho, imali yokucoca iza kubuyiselwa.
Ezinye izinto ekufuneka uziqaphele: imidlalo yebhodi eliqela, iiphazili, iincwadi (thatha incwadi/ushiye incwadi, okanye ndibhale nje incwadi, ndinezinto ezininzi kakhulu), i-WiFi, iincwadi zokupheka, ii-DVD, ispikha seBluetooth, i-Smart TV kunye neNetflix, i-Amazon Prime, iCraveTV kunye neSatellite. Ngena ngokwakho, okanye usebenzise nje iprofayile ethi "Iindwendwe"!
* * * ENTSHA EKWINDLA nasebusika ngo-2021-22 * * * indawo yokubasa umlilo wamaplanga yahlulwa YAZA yafuduka, kodwa kukho itafile yomlilo ye-propane ephandle eza kukunika indawo yokukhempisha. Ndiyaqonda ukuba akukho nto ibetha umlilo wamaplanga, ngoko ukuba ungathanda ukuba nomnye kwindawo yolwandle esetyenziswa ngumntu wonke, iindleko zamaplanga zine $ 20 eyongezelelekileyo.
4.97 · Izimvo eziyi-150
INorth Frontenac yindawo entle ngokupheleleyo yasentlango kumazantsi mpuma e-Ontario eneendlela ezibukekayo ezijikeleza amahlathi kunye neendawo eziphakamileyo, imigxobhozo kunye namachibi. Ndiyibiza ngokuba "nguMda wokugqibela we-Ontario".
Sikwingingqi eyaziwa ngokuba yiLand O' Lakes kwaye ibango layo lodumo yiBon Echo Provincial Park kumantla eCloyne, ngelishwa ivaliwe (kodwa isafikeleleka ngomngcipheko wakho) ebusika.
Ngokuyintloko yindawo yasehlotyeni kwaye ukufumaneka kwemisebenzi yokwenza kubonisa oko. Kukho iindawo zokutyela ezimbalwa, iivenkile, kunye namagcisa (5-15 imizuzu kude) kwaye ezinye zivaliwe ngexesha lasebusika.
INorth Frontenac ayikafunyaniswa zizihlwele, kodwa loo nto inokutshintsha kwakamsinya ngenxa yabantu abaya kuphumla kufutshane nekhaya kwaye bafumanise ubuhle bayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Derrick
Usapho lwam, abangabanini nolusebenzisa le ndawo ekuchithelwa kuyo iiholide, bahlala kule ndawo unyaka wonke. Ngexesha lasebusika ndihlala kwindawo yokulala. Ehlotyeni, ndingafunyanwa kwindawo yokulala, okanye kwindlwana yesiqithi, kodwa ndingafikelelwa ngcono nge-imeyile kwaye ndidla ngokunceda okanye ndiphendule imibuzo ngokukhawuleza. Mna ngokwam ndiyathanda ukunika iindwendwe zam indawo yazo, kodwa ndiyafumaneka ukuba kukho imiba enokuthi ivele.
Usapho lwam, abangabanini nolusebenzisa le ndawo ekuchithelwa kuyo iiholide, bahlala kule ndawo unyaka wonke. Ngexesha lasebusika ndihlala kwindawo yokulala. Ehlotyeni, ndingafunya…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- North Frontenac